Zvakavanzika zvemuchato - Iyo HBO miniseries iyo inokukochekera | Bezzia
Zvakavanzika zveKuroora: Iyo HBO Series Unofanira Kuona
Susana godoy | 14/09/2021 14:00 | Nhau
Kune akawanda akateedzana anoonekwa pamapuratifomu. Iwo ma premieres haaregi kuitika uye zvimwe izvozvi, nekudzoka kune zvinoitika mushure menguva yezhizha. Neichi chikonzero, nhasi iri HBO iyo inotora nzvimbo yedu uye haiuye yega asi inoperekedzwa nevakaroora vane zvakawanda zvekutitaurira. Zvakavanzika zvemuchato ndiwo manyowani nyowani izvo zvichatsvaira.
Zvakanaka, iwe unofanirwa kujekesa izvo zvitsva nekuti zviri pachikuva asi zano rekutanga rinobva kuma70s, saka takatarisana neyekugadzirisa. Tsvaga zvese zvaunoda kuti uzive nezve imwe yeanotarisirwa akateedzana echirongwa chayo, dzidziso dzayo asiwo kune vayo protagonists.
1 Zvakavanzika zvemuchato, remake yeakateedzana kubva kuma70s
2 Izvo iyo HBO mini-nhepfenyuro ndeye
3 Iko kuomarara kwaJessica Chastain naOscar Isaac
4 Chakavanzika chemuchato chine zvikamu zvingani
Zvakavanzika zvemuchato, remake yeakateedzana kubva kuma70s
Zvinotaridza kuti remake inogara iri imwe yesarudzo huru. Nekuti kana zano rikabudirira, wadii kuramba uchibheja pariri gare gare. Zvakanaka, izvi ndizvo zvinoitika ne mini-nhevedzano iyo HBO inopa. Iwo akateedzana epakutanga akanyorwa naIngmar Bergman. Ndiani anoonekwa semumwe wevatungamiriri vakanakisa munhoroondo ye cinema. Mune ino kesi, akadaro Yekutanga nyaya yakapfurwa muna 1973 uye nyeredzi Liv Ullmann naErland Josephson uyo akakwanisa kutora ruzhinji uye nekudaro akabudirira zvikuru uye akawanda mibairo. Iye zvino zano rimwe chete rinodzoka, nemhepo yakavandudzwa asi yakagadzirira kubudirira sepakutanga.
Izvo iyo HBO mini-nhepfenyuro ndeye
Sezvauri kuona kubva pane zvataurwa. Iyo mini-yakateedzana ndeye vaviri vakaroora vanosanganisira Jessica Chastain uyo ari akabudirira kwazvo uye anovimba Executive. Nepo kune rimwe divi kune mumwe wake, Oscar Isaac, anova purofesa wefilosofi uye anoda chero zvodii kuti imba yavo irambe ichienderera. Asi ichokwadi kuti kunyangwe tikaona nharo zviri nyore, hazvizove nyore. Nekuti nderimwe remabasa iwayo inotiratidza, kuburikidza nemeso evatsigiri vayo, zvese rudo, kusavimbika uye kurambana, pakati pemimwe misoro yakawanda ichasvika pamwoyo wako.
Iko kuomarara kwaJessica Chastain naOscar Isaac
Mazuva ano kwave nekutaura kwakawanda pamusoro pekudyidzana pakati pevaviri. Tichifunga izvozvo yakaiswa pakapeti tsvuku muVenice uye dzakatapukirwa. Nekuti panguva iyo Jessica aive akatarisa kumahara, Oscar akamutarisa. Kutaridzika kwakatenderedza pasirese uye kwakazadza netiweki nemataurirwo akanaka kwazvo. Zvese zvakapera nekumbundirana, kutsvoda paruoko uye kuomesa kwakatorwa kusvika padanho repamusoro. Asi kuitira kuti varege kubuda paruoko, vaikurumidza kutaura kuti vatambi vanozivana kweupenyu hwese, vaenda kukoreji vese. Rakanga risiriwo ravo rekutanga basa pamwechete, saka rinofarira zvakatonyanya kuomarara kungavepo.
Chakavanzika chemuchato chine zvikamu zvingani
Kudzokera kune akateedzana pachawo, zvinofanirwa kutaurwa kuti iwe unogona kutora marathon uye rapids. Seie ino nhepfenyuro ine zvikamu zvishanu chete. Saka zvinoita sekunge ichave nemwaka mumwe chete. Dzimwe nguva zvinoita kunge zvipfupi asi zvirinani izvi zvipfupi pane kusarebesa nyaya yatinogona kupedzisira taneta. Anotaurawo nezvenyaya yevaviri ava kubva kune imwe nzvimbo yekutarisa, kumonyanisa kunogara kuchishamisa. Zvinotaridza kuti ane kusahadzika kwese uku murume wake achida kuchengetedza kubatana kwemhuri. Ehezve, kuti uzive, iwe unofanirwa kuzviona nekuti zvatove zviripo paHBO
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Zvakavanzika zveKuroora: Iyo HBO Series Unofanira Kuona
Makiyi ekusarudza duvet